UYesu Kristu, iThemba lethu kuphela, ukuwa komntu icebo likaThixo losindiso | Apg29
Sele 1 Genesis 3, sibona ngayo kwanendlela icebo likaThixo uqala ukuthatha imilo.
Into emangalisayo yenzekile; imvana kaThixo njengedini uYesu Kristu weza ngaphambili. Yena Scriptures ukususela idini zePentatiki wayeke waphawula phambili.
Ndicinga nqunu belujolise kakhulu ukungabikho uzuko lukaThixo. Roma 3:23: "Hinkwavo va dyohile, basilelela eluzukweni lukaThixo." KwisiTyhilelo 3:18, sifunda malunga nqunu, kwaye ukuba ubizo yokuthenga iimpahla ezimhlophe ukuba kubagubungela. 1 Gen 3 kwakhona isixelela indlela uAdam noEva emva kwesiwo, weva uThixo ehamba emyezweni, nendlela wamfihla kuye.
Xa uThixo wabuza uAdam, "Uphi na?" Uya phendula, "Ndive isandi sakho emyezweni, ndasuka ndoyika, ngokuba ndihamba ze. Ke mna ndazifihla. "Xa ufunda esi sicatshulwa, sibona ezimbi kakhulu ngemiphumo yesono. wavalwa uMthendeleko phakathi UThixo ungcwele waye umntu. Yintoni ubuhlungu enkulu olu luntu kwaphulwa eyaviwa nokuba uThixo!
wayengazange Kwafuneka ukuba babe mntu ukuba wayengazange efuna, kodwa ngoku wenza oko. Wayefuna ukuba nolwalamano olusondeleyo umntu, olusekelwe phezu zakhe yokuzikhethela. Le nolwalamano olusenyongweni ichaza uDavide kwiNdumiso 25:14, "INkosi hobnob kunye kwabamoyikayo, umnqophiso yazise abanye kubo." Ngaloo ndlela sibona isono yabangela njani ukuba ukufa ehlabathini.
ERoma 5:12 sifunda oku, "Ngoko ke, njengokuba isono sangena ngamntu mnye ehlabathini nokufa ngaso isono, ngaloo ndlela ukufa kwabatyhutyha abantu bonke, ekubeni bonke bonayo."
icebo likaThixo kuqala ukuba imilo
Sele 1 Genesis 3, sibona ngayo kwanendlela icebo likaThixo uqala ukuthatha imilo. Sifunda indlela uThixo unika isithembiso uMsindisi esiza, mbewu yomfazi elibhekisele uYesu Kristu. "Yona iya kukutyumza intloko yakho," utsho uThixo kwinyoka. KwiSityhilelo 20 sifunda koyisa esichazayo kaKrestu phezu inyoka yakudala, ngubani na enye boMtyholi. Isono ke ngoko ukuba kwezinya uThixo nabantu.
Sibona nePentatiki, ingakumbi 3 Genesis ukhetha indlela uThixo ukuquka amaxhoba, phakathi kwabanye umnikelo wesono nomnikelo wetyala maxa wambi amaSirayeli ukuze zihlawulele ngenxa yesono sabo. Aba bantu wayebonisa phambili kuYesu Kristu nokufa kwakhe okulidini ngenxa yethu. Xa uYohane ukususela Yohane 1 athi xa ebona leswaku Yesu i "Xinyimpfana xa Xikwembu," xa ethetha abantu babezazi ezo ngcinga yokuba imvana umbingelelo kwaye nesono.
Into emangalisayo yenzekile; imvana kaThixo njengedini uYesu Kristu weza ngaphambili. Yena Scriptures ukususela idini zePentatiki wayeke waphawula phambili. UIsaya wayeprofetile uMsindisi kwiSahluko 53, "yena uhlatywe ngenxa yezikreqo zethu, watyunyuzwa ngenxa yezenzo zethu ezigwenxa. Isohlwayo wawuphezu kwakhe uxolo lwethu, kwaye amanxeba yakhe wamphilisa thina. Thina sonke ndimka babeye njengezimvu, elowo waya indlela yakhe, kodwa onke amatyala ethu, uYehova kuye. Yena wabethwa, kodwa wazithoba wavula umlomo wakhe. Njengoko imvana olukhokelwa ekuxhelweni, kwaye imvu cwaka phambi kwabachebi bayo kuyo, ngoko ke wavula umlomo wakhe. "
Siyazi-1 kwabaseKorinte 15:24, 25, ukuba kuya kuza imini xa uKristu uya kumtyumza ngokupheleleyo buziphelise zonke imikhosi abangendawo kunye namagunya kunye ubukhosi. Zonke iintshaba ziza kubekwa phantsi kweenyawo zakhe (khumbula isithembiso 1 Genesis 3 malunga nendlela intloko inyoka kaThixo baphula yi mbewu yomfazi nguYesu Kristu). Ivesi 26 ka-1 kwabaseKorinte 15 uthi, "Le utshaba lokugqibela ukufa anqunyulwe onke amandla."